36 Da bi, Manase ba Makir+ ba Gilead abusua no mu mpanyimfo a wɔn nyinaa yɛ Yosef mma mmusua baa Mose ne Israel mpanyimfo a wɔyɛ agyanom mmusua so atitiriw no nkyɛn, 2 na wɔkae sɛ: “Yehowa ka kyerɛɛ yɛn wura sɛ ɔmmɔ ntonto mfa nkyɛ asase no+ mma Israelfo. Na Yehowa kae sɛ yɛn wura mfa yɛn nua Selofehad agyapade mma ne mmabea.+ 3 Sɛ mmarima a wɔwɔ mmusua foforo mu bɛware wɔn a, mmea no begye wɔn agyapade afi yɛn agyanom agyapade mu akɔ wɔn kununom mmusua mu, na ɛba saa a, wobetwa afi agyapade a wɔbɔɔ ntonto de maa yɛn no mu.+ 4 Afei sɛ Israelfo Ahofadi afe+ no du a, wɔde mmea no agyapade bɛka wɔn kununom mmusua agyapade ho. Eyi kyerɛ sɛ wobegye wɔn agyapade nyinaa afi yɛn agyanom mmusua agyapade mu.” 5 Afei Yehowa nam Mose so ka kyerɛɛ Israelfo sɛ: “Asɛm a Yosef mma abusuakuw aka no yɛ nokware. 6 Ahyɛde a Yehowa de ama Selofehad+ mmabea ne sɛ, ‘Wobetumi aware obiara a wɔpɛ, nanso ɛsɛ sɛ wɔware wɔn agyanom abusuakuw mu nkutoo.+ 7 Na ɛnsɛ sɛ Israelfo agyapade fi abusuakuw biako mu kɔ abusuakuw foforo mu, na Israelni biara mfa ne ho mfam n’agyanom abusuakuw agyapade ho. 8 Ɔbea biara a obenya agyapade wɔ Israel abusuakuw bi mu no, ɛsɛ sɛ ɔware ne papa abusuakuw mu+ na ama Israelfo adi wɔn nananom agyapade so. 9 Ɛnsɛ sɛ agyapade bi fi abusuakuw biako mu kɔ abusuakuw foforo mu, na Israel abusuakuw biara mfa wɔn ho mfam wɔn agyapade ho.’” 10 Nea Yehowa ka kyerɛɛ Mose no, ɛno ara na Selofehad mmabea no yɛe.+ 11 Enti Selofehad mmabea+ a wɔn din de Mahla, Tirsa, Hogla, Milka, ne Noa no warewaree wɔn papa nuanom mma. 12 Wɔwarewaree Yosef ba Manase asefo no bi sɛnea ɛbɛyɛ na wɔn agyapade bɛtena wɔn papa abusuakuw mu. 13 Eyi ne ahyɛde+ ne atemmusɛm a Yehowa nam Mose so de maa Israelfo wɔ Moab sare so, baabi a ɛbɛn Yordan wɔ Yeriko+ no.